06/03/2018 - Page 3 sur 4 -
Fanafihana tany Ambatofotsy : Nirefodrefotra ny basy, olona iray lasibatra
Tokantrano iray manamorona arabe teny Ambatofotsy indray no lasibatry ny jiolahy maromaro mpanao fanafihana mitam-basy. Ny alin’ny 1 marsa lasa teo no naharenesan’ny mpiray monina poa-basy nipoaka avy ao amin’ity tanàna iray amoron-dalana ity. Raim-pianakaviana …Tohiny
Fanafihana orinasa teny Tanjombato : Mpiasa tao ihany no atidoha nikotrika
Tra-tehaka tamin’ny alalan’ny fijerena ny «videos de surveillance » tao amin’ny orinasa iray lehibe voatafika avokoa ireo fikambanan-jiolahy miisa valo nanatanteraka ny fanafihana orinasa iray teny Tanjombato. Ny alin’ny alarobia 22 febroary hifoha alakamisy lasa …Tohiny
Fiarahamonim-pirenena : Hanampy amin’ny fametrahana ny fandriam-pahalemana
Ny firaisan-kina no hery. Na dia eo aza ny ezaka ataon’ny fitondrana, dia mbola misy ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara, na an-drenivohitra na any ambanivohitra. Ny fahatsapana izany, dia hanampy amin’ny fametrahana ny fandriam-pahaleman’ny fiarahamonim-pirenena …Tohiny
Rajaonarimampianina Voahangy : « Fotoana izao hanaporofoana fa manam-piniavana ny vehivavy malagasy »
Tonga nanotrona ireo mpampianatra vehivavy ato anatin’ny Dren Analamanga, amin’ny fankalazana ny andron’ny vehivavy ny vadin’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Voahangy sy ny solontena maharitra ny firenena mikambana monina eto Madagasikara, Violetta Kakyomya, ireo minisitra vehivavy, ny …Tohiny
Tsy mba fahita teto Madagasikara izany manipy baomba na grenady amina foiben-toeran’ny antoko politika iray izany na inona tsy fitovian-kevitra nisy tamin’ireo samy mpanao politika. Mitranga anefa izany ankehitriny, raha ny zava-nisy tetsy amin’ny foiben-toeran’ny ...Tohiny